होमपेज / शुक्रबार / 'हिरो' हेमा
'हिरो' हेमा	14 Jul 2013 आइतबार ३० असार, २०७०
सुन्दरी मोडलका रूपमा परिचित हेमा श्रेष्ठ फिल्ममा देखिँदै छिन्। फिल्ममा उनी 'हिरोइन'का रूपमा होइन, 'हिरो'का रूपमा प्रकट हुनेछिन्। मिलन चाम्सले निर्माण/निर्देशन गरिरहेको एक्सनप्रधान फिल्म 'हँसिया'मा उनको भूमिका प्रमुख छ। अरू फिल्मजस्तो यहाँ हिरोइनलाई आपत् पर्दा हिरो होइन, बरु हिरोलाई आपत् पर्दा यी हिरोइन आइपुगेको देख्न सकिनेछ। हेमाले पनि फिल्म 'हँसिया'मा काम गर्नका लागि आठ महिनामा आफूलाई 'आरन'मा खारेकी हुन्। फाइट, स्विमिङ, किक–बक्सिङ सिकेपछि उनले फिल्म सुटिङ थालेकी हुन्। फिल्ममा सिआइबीको भूमिकामा देखिएकी उनीसँगै राजेश हमालले मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्दे छन्। 'हँसिया' कत्तिको धारिलो छ, परख गर्न बाँकी नै छ। Tweet Leaveacomment Message *
कम्पित मन बेतपानी पुग्छमंगलवार राती १० बजे छोरा शुभम र श्रीमती मुनमलाई डेरानजिकै खुला चौरमा सुत्ने व्यवस्था मिलाएर अँध्यारो कोठामा ल्यापटप अन गरेर महाभूकम्पले निम्त्याएको विपद्का बारेमा लेख्न बस्दा मनमा एकतमासको कम्पन भइरहेको...	कांग्रेससँग तर्क छैनकांग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशनको मूल प्रश्न के हो ? मिडियामा चलेका बहस र चर्चा सुन्दा खास गरी दुइटा प्रश्न उठेका देखिन्छन् । पहिलो, कांग्रेस हाँक्ने नयाँ नेतृत्व को हुने ? दोस्रो,...	भन्न खोजेको के?विवाह नगरे पनि श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र श्वेता खड्का 'जोडी'कै रूपमा चिनिन्छन्। फिल्मदेखि व्यवसायसम्म सहकार्य गरिरहेका उनीहरूले सम्बन्धलाई औपचारिकता मात्रै दिन बाँकी रहेको बताइन्छ। शनिवार एक कार्यक्रममा यो जोडी सँगै देखियो।...	पत्रकारिताका गुरुका नजरमा शुक्रवारप्रा. पी खरेलमेरो विचारमा नेपालबाट प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिकाहरूमध्ये विविधता, लेखनशैली, चित्र प्रयोगका हिसाबले शुक्रवार अब्बल पत्रिकामा पर्छ। बजारमा थुप्रै पत्रिका स्थापित भइसकेको अवस्थामा शुक्रवार प्रकाशनमा आएको थियो। कुन ध्येयले हुन्छ विमान अपहरण ?अन्तर्राष्ट्रिय उडानसेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुन थालेके धेरै समय बित्न नपाउँदै विमान अपहरण हुन थालेको थियो । तर, त्यतिबेला विमान अपहरणकारीहरूले राजनीतिकभन्दा पनि व्यक्तिगत आकांक्षा पूर्तिका लागि हाइज्याक गर्ने गर्थे...	टिकट पीडित (वक्रासन)सुन्धाराको दोहोरी साँझमा छिरेका थिए, यी तीन जना जिल्लास्तरीय नेता। तीनै जना एकदम पराजित मुखमुद्रामा थिए, सर्वस्व हारेको जुवाडेझैँ। एक महिनासम्म आ–आफ्ना शीर्ष नेताका द्वारमा लम्पसार परेका थिए उनीहरू। दोस्रो...	कोरियामा कामदारको बेहालरोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान नेपालबाट हजारौँ युवा तछाडमछाड गरिरहेको समयमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले कोरियामा रहेका आप्रवासी कामदारको अँध्यारो पाटोलाई सार्वजनिक गरेको छ।	अलिकति दोहोरी अलिकति फोहोरीकरिब दुई दशकअघि देशमा दोहोरी साँझको जन्म भयो । कुनै बेला दोहोरी साँझ गायन प्रतिभाका लागि राम्रो 'प्लेटफर्म' थियो । यसबाटै दर्जनौँ गायक–गायिकाले आफ्नो करिअर चम्काए । दोहोरी साँझ सभ्य...	शुक्रबार	अलिकति दोहोरी अलिकति फोहोरीकरिब दुई दशकअघि देशमा दोहोरी साँझको जन्म भयो । कुनै बेला दोहोरी साँझ गायन प्रतिभाका लागि...	पुलिसले किन मार्छ छापा?कुनै बेला प्रहरी कपाल पाल्ने र मुन्द्रा लाउने तन्नेरीको दोहोलो काढ्दै हिँड्यो। पार्क, पोखरी, मन्दिरतिर जोडी...	कस्तो मनोरञ्जन? कसको मजाक?गजब कतिसम्म छ भने सेक्स उद्योग र चलचित्र उद्योग दुवैलाई मनोरञ्जन उद्योग भनेर मान्नेहरू पनि छन्।...	मधेशीको सशक्त भूमिका उतार्न चाहन्थेँ : नाजिर हुसेनरंगमञ्च हुँदै फिल्ममा उदाएका अभिनेता हुन् नाजिर हुसेन। रंगमञ्चमा उनको नाटक हेर्न पुग्नेहरू उनलाई 'अभिनयको जादुगर'सम्म...	भर्खरै...